Rajeeb Ghimire Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Rajeeb Ghimire
कथा : छुटेको साथ र जितेको सम्बन्ध ।
~राजिव घिमिरे~ कुनै शनिबार कान्तिपुर कोशेलीमा पढेको थिए, ‘एउटा युवकको जीवनमा ४ वटा कुरा महत्त्वपुर्ण हुन्छ- घडि, रेडियो, साइकल र युवती ।’ समय सँगै यी प्रतिनिधिहरुको स्वरुप फेरिएको छ तर महत्त्व जस्ताको त्यस्तै । म जति नै साधु भएर हिडें … Continue reading →
~राजिव घिमिरे~ ‘भाउजु, Company चाहिन्छ भने भनौं है ।‘ यो सुन्ने बित्तिकै मेरो होस ठेगानमा रहेन । रिसले कान राता भए । उठेर एक चड्कन लगाउन पनि सकिन । उ अझै म तिर हेर्दै थियो । कसरि सकेको होला भन्न … Continue reading →
Posted in नेपाली कथा	| Tagged Rajeeb Ghimire	| 1 Comment
कथा : एउटा आशा !
~राजिव घिमिरे~ त्यो कुनै नौलो शनिबार थिएन । आशा सधै जसो बिहानको नुहाई धुवाई सकेर चोक पुगिन् , पिपलमा पानी चढाउन । लामिछाने दिदी र शान्ता भाउजु पनि संगै पुगिसक्नु भएको थियो । आशा पिपलमा पानी चढाउँदै घुमिन् । शायद … Continue reading →
कथा : म बिहे गर्न सामान्य केटि पाउन संघर्षरत छु ।
~राजिव घिमिरे~ “एम ए पढ्दै छे, स्कुलमा पढाउँछे, केटि राम्री छ, एकचोटि हेर” आमाले चिया संग प्रस्ताव पस्कनु भयो । बिहे गर्ने त यस्तै केटि संग हो, तर पनि यो मामला मा किन किन म निर्णय गर्न एकदम कमजोर भएरहेको … Continue reading →
कथा : बबिताहरु, महरु, सत्यहरु !
~राजिव घिमिरे~ कालो ज्याकेट लगाएकि रहेछ । मैले तल पनि नजर दौडाएं । कटराईजको खैरो पाईन्ट रहेछ । म तिर नहेरि, माईक्रोबाट बाहिर हेरि रहेकि थिई । शायद म चढ्नु अगाडि उसले मलाई देखि सकेको हुनु पर्दछ । उ हाम्रो … Continue reading →
कथा : तरुनो पागल
~राजिव घिमिरे~ “तिमी घटनाले पागल बनायो भन्छौ, भाग्यले पेल्यो भन्छौ । तर पागल हुन कहाँ सजिलो हुन्छ र ? यहाँ चार पीरमा तपेर कोही पागल हुँदैन । पागलपन को ढोंग गर्छन । फोस्रो दु:खलाई म पागलपन मान्दिन। मान्न पनि हुदैन … Continue reading →
कथा : मेरो आकाश
~राजिव घिमिरे~ म धरातलमा छु, एक्लो र आफै संग । म हांसि दिन्छु । किन? हुन त रोएको पनि छु । दुबै छन् मसँग । म दुबै संग छु । लोग्ने मान्छेको बिश्वास सांच्चै पातलो हुन्छ । छिसिक्क केहि हुनु … Continue reading →